Dala itende elisha - Imikhiqizo yase-China Green Camping
Ngaphambi kokuthi wakhe itende, kufanele wazi ukuthi izoba yini itende elisetshenziselwa yona nokuthi luhlobo luni lwendawo okuzosetshenziswa ngalo itende, njengokukanisa, ukugibela, ugu, impi, noma nje indawo yokukhosela yelanga, yileyo esetshenziswa endaweni ebandayo noma eshisayo Indawo, kukhona umoya onamandla kanye nemvula, ingabe kukhona isidingo esikhethekile. Ngemuva kwalokho ungaqala ukwakha itende.
Lapha sizothatha itende le-igloo njengesibonelo. Leli tende limakethe laseJalimane lamakhampasi. Kudingeka ilungele abantu abathathu, ukusetha ngokushesha nokusondelana, kufanele kusetshenziswe ukukhempa ngeviki elilodwa, kudingeka kube nesikhala se-rucksack, izicathulo nezinye izinsimbi. Ngemuva kwalokho sihamba ngezinyathelo ezingezansi.
Ngokusho kwe-ISO5912, umuntu ngamunye kufanele abe nesikhala esiseduze kwama-200 x 60cm, umuntu ongu-3 akufanele abe ngaphansi kwama-200 x 180cm. Njengoba umuntu waseJalimane emkhulu kunokujwayelekile, sinquma ukuba nosayizi 210 x 200. Ukuphakama ngokujwayelekile kuzungeze i-120-140cm yetende le-igloo, sinquma u-120cm, njengoba kufanele kube nezinsimbi ezingama-20cm ezisele ngohlelo lokusetha ngokushesha. Ukuze ube nesikhala se-rucksack nezinye izesekeli, sihlose ukuba ne-vestibule ezungeze ama-80-90cm ngaphambili komnyango. Manje, sesingaqala ukwenza imidwebo. Abakhiqizi bamatende abaningi banomnyango wokuqamba kule minyaka.
Ngemuva kokuba umdwebo uqediwe, umklami uzokwenza ipuleti ngokusho kwesikebhe. Eminyakeni eyi-10 eyedlule, amafektri amaningi etende enza ipuleti ngesandla, kepha manje, iningi labaphakeli betende benza ipuleti ngesoftware.
Phrinta ipuleti kuqala, bese usika indwangu ngokusho kwepuleti.
phrinta ipuleti setende
Hlunga isampula yokuqala.
Setha isampula yokuzama bese ubheka ukuthi ilungile noma idinga ukuthuthukiswa, imvamisa idinga ukubheka iphethini, usayizi, ifreyimu, ukwakhiwa, ukusetha nokuvala kulesi sigaba. Uma konke kulungile, bese wenza itende lokugcina ngezinto ezilungile nozimele. Uma kukhona okudingeka kuchitshiyelwe, sika indwangu futhi wenze 2nd , 3 rd , 4 th … zama isampula bese ubuyekeza futhi. Njengoba lesi sicelo setende sisetha ngokushesha futhi sisivala, sikhetha uhlelo olufana nesambulela.
Lapho isampula yokuzama isiqediwe, bese wenza isampula yokugcina ngendwangu eyiyo, usebenzise ifreyimu efanelekile nezinye izinto, njengesigxobo setende, intambo yomoya. Ngenxa yokuthi leli tende elingelokukhempa okungenani isonto elilodwa ngaphandle, sinquma ukuba nendwangu yekholomu ephezulu yamanzi bese sithinta umthungo. Ngemuva kwalokho yenza isivivinyo ngokuya ngezindawo ezisetshenziselwe ukusetshenziswa. Njengokuvimbela amanzi, ukumelana komoya, i-anti-UV, ukumelana ngentambo, ukusebenza komoya omncane, umthamo womthwalo…
Lapha yinqubo evamile yokwakha itende elisha, ngaphandle kwezinkinga ezingenhla, ziningi ezinye izindaba okudingeka zibhekwe, njengesisindo seyunithi, usayizi wokupakisha, ukuqina, ukubuyiselwa kwamanzi, ukuphepha, isidingo somthetho emazweni abasebenzisi bokugcina . Uma itende ngelezempi, njengetende lezempi esikhiqize ilungu le-NATO, okuyinkimbinkimbi kakhulu futhi kufanele licabangele okuningi futhi lihlole okuningi.
Isikhathi sokuthumela: Jul-25-2020